Igama lomdlali omkhulu u-Audrey Hepburn uyaziwa kwizigidi zabantu kulo lonke uhlobo. I-Idol yama-50, ihlala isithonjana somfanekiso okwenyaniso kude kube ngoku. Ukususela kwiifoto ezininzi, ezininzi zazo zihlotshiswe kwiimaphephancwadi zamaphephancwadi awaziwayo, umfazi oncomekayo ukhangele ngathi. Ubuso bakhe bukhanya ngaphakathi ngaphakathi ngobubele, ubuncinci besini kunye namandla, okungekho wonke umntu onokubona ngombono. Loo nto yayiyi-Audrey Hepburn ngexesha lokuphila kwakhe, le nto yahlala ekhunjweni wonke umntu omaziyo yena ngokwakhe, esebenze naye okanye ubuncinci bodwa ebomini bakhe wabona ifilimu ngokuthatha inxaxheba.
U-Audrey ligama elincinci lomdlali. Igama lakhe elipheleleyo ngu-Audrey Kathleen van Heemstra Hepburn. Leli gama elide elihle livela ku-mother-baroness. Umdlali wezabelo ozayo uzalelwa ngoMeyi 4, 1929 eBelgium. Umtshato weNtloko yaseDutch kunye nomqeshwa onobhankini obulula kunzima ukubiza ngempumelelo. Kwintsapho kwakukho ukuxabana, ama-scandals, kwakungenanto yokuqonda phakathi kwabazali baka-Audrey. Nangona kunjalo, wakhuliswa kwimimiselo eqinile yonke imindeni ehloniphekileyo yale minyaka. Ukugxininisa okubalulekileyo ekukhulisweni kwabantwana kule ntsapho kwakukhona-umsebenzi, ukunyaniseka, ukuzimela, ukunyaniseka kunye nokuzimisela ukunceda abanye. Mhlawumbi, kwakunjalo uhlobo lokukhuliswa olwenza ukuba u-Audrey akwazi ukuzisebenzisa kwimifanekiso yabalinganiswa bakhe.
Nangona kunjalo, ukufudumala nothando oluqotho luka-Audrey alukwanele ukususela ebuntwaneni. Unina wayexinzeleleke kakhulu kwiimvakalelo zakhe, kwaye uyise wayenenkxalabo enkulu malunga neengxaki emsebenzini nasemndenini ukuhlawula ngokwaneleyo abantwana. Kwinqanaba elithile, umtshato wabazali waqhekeka, obangela ukukhathazeka okukhulu kwengqondo ku-Audrey.
Emva kokuqhawulwa kwabazali bakhe, u-Audrey wahamba nabazalwana kunye nomama wakhe ukuba bahlale e-Arnhem, indlu yendlu eyayingumama ka-Audrey. Imfazwe yaqala xa intsapho ihlala ihleli khona. Ngenqweno, u-Audrey kwafuneka akhulele kusasa ngexesha lokuvalwa kwexesha elide. Wanikela iincwadana ezichasene ne-fascist, eziqhubekayo ukuqhuba ibhaltshi ngokuziqhelanisa, zanikela abantwana imfundo yokudanisa. Ngobusuku, u-Audrey wadansa ngomvuzo othobekileyo phambi kwesangqa esincinane sabameli abaqhelekileyo.
Iminyaka yemfazwe, kunye nokunyanzelwa kwabo, ukubandezeleka nokuxinezeleka, kwakungeyona nto yintombazana encinci. Ku-Audrey, i-anemia yaqala, waza wafumana i-jaundice. Ezi zifo zimbeka ngokuqhelekileyo kumgca phakathi kokufa nokufa, kodwa intombazana yayisinda ngokumangalisayo. Xa wayeneminyaka eyi-16, u-Audrey wahamba nonina waya e-Amsterdam, apho intombazana yayisondele ngokukhawuleza iya esibhedlele kwaye yayiphathwa ngamehlo nonina.
Emva kokubuya, wangena kwiklasi ye-ballet yothisha odumile uSonya Gaskell, kwaye eneminyaka eyi-18 waqala ukufundisisa eLondon kwisikolo sikaMary Rambert. Ukuze uphile, u-Audrey wanyanzeliswa ukuba asebenze ixesha elithile, ukufowunelwa kwiintengiso, ukudansa kuma-nightclub kunye neemculo. Emva koko amaphupha akhe adibaniswa kuphela nebhalethi kunye nendawo yokuzonwabisa.
Kodwa isithuba siphendukile ngokwahlukileyo. Ngolunye usuku, u-Audrey waphawula ukuba udumileyo ngelo xesha, uMongameli Mario Jumpy, owanikela intombazana indima kwifilimu "Ukuhleka eParadesi." Le nxaxheba ayizange ifake umdlali we-actress akukho udumo, ukungaziwa, akukho mali. Kwiminyaka emibini emibini wayenza kuphela kwimisebenzi episode, de ekugqibeleni wayenendima kwifilimu "iiholide zaseRoma", emva kokuqala kokuvuswa kwenkwenkwezi. Emva koko umculo "uSabrina" wahlolwa, ingubo awayezithungela yona yiZhivanshi. Ukususela kuloo maxesha phakathi kuka-Audrey kunye nomqambi odumile wefashoni, ubuhlobo obusondeleyo kwiminyaka emininzi yaqala.
Kwaye kwakukho nezinye iifrimu zomoya ezazisa u-Audrey udumo lomhlaba kunye ne-Oscar ngaphezulu. Isitayela sale mfazikazi omangalisayo sakopishwa kumazwe amaninzi, waba isithixo, waxeliswa kuyo yonke into. Kuthiwa i-corporation uTiffany no-K yaba yintando kuphela ngenxa yokuba ikhankanywe ngu-heroine we-movie "Breakfast Breakfast eTiffany."
Nangona uphumelele ukuvalelwa, imali kunye nodumo, u-Audrey wayemelana kakhulu nesifo sesifo. Kodwa isicatshulwa sezingelosi, umkhwa wokusebenza nzima nobunzima, umnqweno wokuthandana nokuthandwa akuzange iholele umdlali wezonwaba kwizinto ezifunayo. Wayephindwe kabini, kodwa le mitshato ayinakubizwa ngokuba yimpumelelo. Intsingiselo yodwa yemitshato yakhe yayingumntwana omthandayo omdala, ozelwe ngumlawuli kunye nomlimi uMel Ferrer. Unyana wesibini kaLuka emtshatweni wakhe wesibini, u-Audrey, naye waqhawula ukuqhawula abazali bakhe, nangona umtshato wesibini we-actress wathembisa ukuba uyavuya.
Uthando lokwenene lwafika ku-Audrey malunga neminyaka engama-50, xa wadibana nomdlali we-Dutch uRobert Waldes. Umtshato oseburhulumenteni phakathi kwabo awuzange kwenzeke, oko, ngokutsho kukaVicrey, akuzange kubangele uvuyo.
I-Filmography U-Audrey Hepburn ibandakanya iifilimu ezingama-20, ezininzi zazo ezanikezelwa ngamabhaso aphezulu kakhulu kwihlabathi. Kwiminyaka yokugqibela yobomi bakhe, u-Audrey wenza umsebenzi omninzi wokuncedisa, ngokukhethekileyo ekuncediseni abantwana abalambile baseAfrika, apho awanikezelwa nguMedal of Glory nguMongameli we-United States. Wafa ngo-1993 kwiminyaka engama-64 yobomi. Isizathu sasingumdlavuza, ongenakuphilisa.
Ukususela ngoko, umfanekiso wakhe, umfanekiso wesinenekazi, usuphawu lobunzima bexesha, uphawu lobuhle bokwenene, ububele kunye netalente.
Ibhayisikobho yomculi uJustin Timberlake
UAshley Greene: I-Biography
Iyintoni imfihlelo yobuhle beenkwenkwezi ze-movie kunye neenkwenkwezi ze-pop?
Umpolitiki ophumelelayo uSergei Tigipko
I-Biography yomculi uMikhail Pugovkin
Ziziphi ukutya eziya kunceda ukuphepha umhlaza?
Ukunyanga kwamayeza eMntwaneni
Indlela yokukhetha izitya zexesha elilodwa?
Indlela yokufumanisa ukuba indoda iyini ngesondo ngokuziphatha kwayo
I-Pilaf kwi-Polaris Multivariate